प्रांगारिकका नाममा किसानदेखि उपभोक्तासम्म मारमा – Krishionline
प्रांगारिकका नाममा किसानदेखि उपभोक्तासम्म मारमा
काठमाडौं,वैशाख । अहिले मुलुकभर प्रांगारिक कृषि खेतीको चर्चा र बहश भईरहेको छ । विगतका वर्षहरुमा यताकदा सुन्न पाइने प्रांगारिक कृषि खेती अहिले हरेक दिन जुनसुकै कार्यक्रममा पनि प्रांगारिक खेतीका लागि प्रोत्साहन भन्दै चर्का बहश गरेको पनि सुनिन्छ ।
जे जसरी प्रांगारिक कृषि खेतीको कुरा गरिन्छ त्यस अनुरुप पूर्वाधार विकास गरिएको छ कि छैन वा नेपालमा तत्काल प्रांगारिक खेती सम्भावना कत्तिको छ वा यसलाई बृद्धि गर्दै लैजानका लागि उत्पादक अर्थात किसानहरु कत्ति उत्सुक छन् भन्ने कुरामा कसैले पनि ठोस पहल भने चालेका पाइँदैन ।
जे होस् प्रांगारिक खेतीको चर्चा चल्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि उचित छ । तर त्यही प्रांगारिकका नाममा किसान एवं उपभोक्ता दुवै ठगिने कार्यले पनि तीव्रता पाईरहेको देखिन्छ ।
प्रांगारिक खेती गर्ने किसानहरुले त्यसका लागि आवश्यक मल, जैविक विषादी लगायतका बस्तुमा चर्को मूल्य तिर्नु पर्ने वाध्यता देखिन्छ । जसले लगानी निकै बढोत्तरी भएको छ । सोही अनुरुप एकातिरकिसानहरुले लागत मूल्य उठाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताहरुलाई व्यापारी सिधा भाषामा भन्ने हो भो विचौलियाहरुले प्रांगारिक कृषि उपजका नाममा चर्को मूल्यका विक्री गरिरहेका छन् ।
अहिले बजारमा प्रांगारिक कृषि उपजका नाममा खुलेका बखेल्ती पसलहरु हेर्ने हो भने ती उत्पादन कसले गरे र कहाँ गरिएको छ ? प्रांगारिक कृषि उपज यतिधेरै भईसकेका छन् त ? खोजी गर्ने निकाय निकम्मा जस्तै देखिएको छ ।
उपभोक्ताहरुको चाहना अनुरुप बस्तु विक्री गर्ने नाममा जथाभावी रुपले प्रांंगारिककका नाममा ठगी भएको देखिन्छ । किसानलाई उपलब्ध गराईने प्रांगारिक मल होस् वा उपभोक्ताले खरिद गरेर उपभोग गरिरहेका कृषि उपजमा नै किन नहोस् । यसरी दिनदहाडै लुट चलिरहँदा पनि सम्वन्धित मन्त्रालयले चासो दिन सकेको देखिँदैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रांगारिक कृषि उत्पादनको डिङ्ग हाँकिरहेका छन् । त्यही फेरो समातेर प्रधानमन्त्री देखि राजनीतिक दलका नेतृत्व समेत प्रांगारिक कृषिको विषयमा बोल्न आतुर छन् बोलिरहेका छन् तर के त्यसका लागि उत्पादक किसानहरुका लागि काम भने केही पनि गर्न सकेकका छैनन् । यसले त केवल ठगी गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मात्र गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, बैशाख २२, २०७६
वर्डफ्लु लुकाउन कुखुरा व्यवसायी सक्रिय, गोप्य रुपमा कुखुरा गाड्दै